မက်ထရစ် GRIMOIRE ဆော့ဖ်ဝဲမက်ထရစ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ကိရိယာများ။ | Linux မှ
the_robertucho | | applications များ, GNU / Linux များ
အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည် ပို၍ သေချာကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည် software ကိုမက်ထရစ် စီမံကိန်းတစ်ခု၏အဆင့်အတန်းကိုစာရင်းပြုစုရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်စီမံကိန်းသည်စီမံကိန်းတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်မကျော်လွန်နိုင်ပါ ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်.
မက်ထရစ် Grimore ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အရေးကြီးသောနှင့်သက်ဆိုင်သောတန်ဖိုးများကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုမည့်ကိရိယာများစုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကွဲပြားခြားနားသောမူလရင်းမြစ်များမှဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ထို့အပြင် Metrics Grimoire သည်ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်မှတ်ချက်များအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ သောအားဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ယူတဲ့ software ကို၏အကောင်အထည်ဖော်မှု၏မူဘောင်အတွင်းလုပ်နေကြသည် အသိုင်းအဝိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆက်လက်ရှိနေသည်။ အထူးသဖြင့်စီမံကိန်းအများစုတွင်မတူကွဲပြားသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်းအရေးကြီးသောဒြပ်စင်တစ်ခုထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုသည့်အညွှန်းကိန်းများထုတ်လုပ်ရန်ဤအမှုအလုံးစုံ တစ် ဦး software ကိုစီမံကိန်း၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ.
MetricsGrimoire ကိရိယာများသည် GitHub (git နှင့် GitHub problem tracing) အတွက်ပါ ၀ င်သူများအပါအ ၀ င် repositories အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့သည်။
မက်ထရစ်Grimoire အမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်၎င်းကဲ့သို့သောအမြင်မြင်နိုင်သောကိရိယာများနှင့်တွဲဖက်ပြီးဖြစ်သည် VizGrimoire (ဥပမာအားဖြင့်) က command စာရင်းဇယားသို့မဟုတ်အစီရင်ခံစာများရရှိရန်လုံးဝဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
MetricsGrimoire သည်မူရင်းမှဖြစ်သည် Rey Juan Carlos တက္ကသိုလ် သုတေသနအဖွဲ့တွင် (မက်ဒရစ်) မင်္ဂလာပါအမည်ရှိ applications များ၏ compendium အတွင်း LibreSoft ကိရိယာများ။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီးတွင်ရပ်ရွာငယ်လေးတစ်ခုစတင်ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပြီးယခုတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ developer များနှင့်အသုံးပြုသူများပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဒေတာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည့်အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ဆော့ (ဖ်) ဝဲတစ်ခုတည်ဆောက်ရာတွင်၎င်းသည်လိုအပ်သည်ထက်ပိုသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သင့်ကိုအထင်ရှားဆုံးသောစာရင်းအောက်သို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ကိရိယာများ၏ဤအစုအတွင်း applications များ။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု၍ မရှုတ်ချပါစေနှင့် CVSAnalY၊ ဤကိရိယာသည်သင့်အားပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်တာဝန်ခံသောစနစ်များမှအချက်အလက်အားလုံးကိုစုစည်းရန်ကူညီသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် အရင်းအမြစ်ကုဒ်စီမံခန့်ခွဲမှု (ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ အရာအားလုံး), ဒါကြောင့်လည်းအမျိုးမျိုးသော repository ကိုအတန်း၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြေး (CVS, ဒါမှမဟုတ် Subversion နှင့် GIT ပင်) SQL ဒေတာဘေ့စအတွင်းသတင်းအချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
၎င်း၏အမည်ကဘာလဲဆိုတာ၏စိတ်ကူးတစ်ခုပေးသည်။ ဒီ tool ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်တယ် အမှားခြေရာခံခြေရာခံပြproblemsနာအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဤပြproblemsနာများမှစုဆောင်းထားသောအချက်အလက်အချို့ကို SQL ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုတွင်စုဆောင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ လောလောဆယ် Bicho သည်အခြားသူများအကြား Jira၊ Bugzilla, GitHub, GoogleCode, Launchpad, Allura တို့ကိုထောက်ပံ့သည်။
MlStats (MailingList Stats)
MlStats ၏ရဝုဏ်နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ် မေးလ်စာရင်းမှသတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူပါ နှင့်အတူအားလုံးအများစုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည် စာပို့သမား၎င်းအပြင်၎င်းသည် mbox format ဖြင့် local files များနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ MailingLitStats နှင့်အတူသင်ကဲ့သို့သောဒေတာများမှလေ့လာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာသင်ရှာတွေ့မယ့်စာကြည့်တိုက်ပါ repositories GitHub ကနေ source code ကိုတိုက်ရိုက်
၎င်းသည်အခြားသူများအကြားအရွယ်အစား၊ ရှုပ်ထွေးမှုစသည့်အချို့သော C code အစီအမံများမှအချက်အလက်များကိုရယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။
CMetrics အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်သွားရမည့်နေရာဖြစ်သည် ir.
Sibyl သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်မေးခွန်းနှင့်အဖြေစတိုင်ရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုဒေတာဘေ့စ်တွင်သိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်ပါက။ သငျသညျ Askbot နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျော်ကြားသော StackOverflow ကဲ့သို့သောအခြားစာမျက်နှာများလည်းဒီ tool ၏စီမံကိန်းအတွင်း၌ရှိကြ၏။
အကယ်၍ သင်ပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူလိုပါကသို့မဟုတ်ဤကိရိယာတစ်ခုခုကိုတစ် ဦး ချင်းစီ download လုပ်ပါကသင်လိုအပ်သော tool ၏စာမျက်နှာတိုင်းမှပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ဤသင်၏အလွန်ကောင်းမွန်သောတိုင်းတာရေးကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုသိလိုပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့သည်အပိုအချက်တစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့ဆော့ဝဲ နှင့်နှစ် ဦး စလုံး၏စီမံကိန်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည်ကို open source ဖြစ်ပြီးစီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်မှထုတ်လုပ်သောစီမံကိန်းများအပြင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » မက်ထရစ် GRIMOIRE ဆော့ဖ်ဝဲမက်ထရစ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ကိရိယာများ။